Shiinaha Fiberglass jarjaray Strand Mat Powder saarayaasha galayaasha iyo alaab | Beihai Fiberglass
Maro adag oo la jarjaray Strand Mat Powder
1.Waxay ka samaysan tahay xargo goos goos ah oo si aan kala sooc lahayn loo qaybiyey oo ay isku hayaan budada isku xidha.
2. La jaan qaadi kara UP, VE, EP, cusbo PF.
Ballaca duudduuban wuxuu u dhexeeyaa 50mm ilaa 3300mm.
Budada E-Glass Sariir goyn ah wuxuu ka samaysan yahay xargo goos goos ah oo si is daba joog ah loo qaybiyey oo ay isku hayaan budada isku xidha.Waxay la jaan qaadayaan cusbada UP, VE, EP, PF. Balaca duudduuban wuxuu u dhexeeyaa 50mm ilaa 3300mm.
● Burburka degdega ah ee styrene
Strength Awood adag oo cufan, oo kuu oggolaaneysa in loo isticmaalo hannaanka jiifinta gacanta si loo soo saaro qaybo ballaaran
Wet Si wanaagsan oo qoyan u dhex mara oo si dhakhso leh qoyan uga soo baxa weelka, heshiiska kirada hawada ee degdegga ah
Resistance Caabbinta daxalka sare ee aashitada
Codsiyada ugu dambeeya isticmaalkeeda waxaa ka mid ah doonyaha, qalabka qubeyska, qeybaha gawaarida, dhuumaha kiimikada u adkeysanaya kiimikada, taangiyada, munaaradaha qaboojinta iyo qeybaha dhismaha.
Dalabyo dheeraad ah oo ku saabsan qoynta-soo-baxa iyo wakhtiga burburka ayaa la heli karaa markii la codsado. Waxaa loogu talagalay in loogu isticmaalo jiifka gacanta, wareejinta fiilada, isku xoqidda iyo geedi socodka laminating joogto ah.
Faahfaahin gaar ah ayaa la soo saari karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha.
Habka Waxsoosaarka Mat
Waxyaabaha la soo uruuriyay waxaa lagu jarjaray dherer cayiman, ka dibna waxay ku dhici doonaan xamuul qaada si aan kala sooc lahayn.
Xargaha la jarjaray waxaa isku xira labada xirmo emulsion ama budada isku xira.
Ka dib qalajinta, qaboojinta iyo wareejinta, gogol istaag ah oo la jarjaray ayaa la sameeyaa.
Mid kasta Sariir goyn ahwaxaa lagu dhaawacay tuubbo xaashi ah oo dhexroorkeedu dhan yahay 76mm, rooga duubkuna wuxuu leeyahay dhexroor dhan 275mm. Dulucda gogosha waxaa lagu duubay filim caag ah ， ka dibna waxaa lagu ridayaa sanduuq kartoon ah ama waxaa lagu duubaa warqad gacmeed. Is duubo ayaa si toos ah ama toosan loo dhigi karaa. Gaadiid ahaan, duubka ayaa si toos ah loogu ridi karaa khaanad ama baallooyinka.
Haddii aan si kale loo cayimin, Goynta Strand Mat waa in lagu keydiyaa meel qalalan, qabow oo aan roobka u diidi karin. Waxaa lagugula talinayaa in heerkulka qolka iyo huurka waa in had iyo jeer lagu hayaa 15 ℃ ～ 35 ℃ iyo 35% ～ 65% siday u kala horreeyaan.
Hore: E-muraayad lagu tolay Xadhig Go 'Strand Mat
Xiga: Fibreyaasha Basalt
Jar jaranjarada Mat 450gsm
E-muraayad lagu tolay Xadhig Go 'Strand Mat